भोलि बैशाख १२ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन अशुभ-शुभ? हेर्नुहोस राशिफल! – Ramailo Sandesh
भोलि बैशाख १२ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन अशुभ-शुभ? हेर्नुहोस राशिफल!
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)तपाईको दिन आर्थिक र व्यावसायिक रूपले लाभदायक होला। आर्थिक लाभ मिल्नेछ। लामो समयको वित्तीय आयोजन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। शरीर र मनबाट स्वस्थरहनुहुनेछ। मित्र र पारिवारिक सदस्यसँग आनन्दमा दिन बिताउनुहुनेछ। धेरै मान्छेसँग सम्पर्कमा रहनुहोला। व्यापारीगणको व्यापारको विस्तार र आयोजन गर्न सक्नुहुनेछ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)विचारको विशालता र बोलीको जादुले अन्यलाई प्रभावित र मन्त्रमुग्ध गर्नेछ। मान्छेसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहनेछ। बौद्धिक चर्चा वा वाद-विवादमा सफलता मिल्नेछ। वाचन एवम् लेखनमा अभिरुची बढ्नेछ। विधार्थीको लागी राम्रो समय रहेको छ। परिश्रम गरेअनुसार कम सफलता मिल्नेछ। पाचनतन्त्रको समस्याले स्वास्थ्य खराब हुनेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा दुविधा उत्पन्न हुनेछ। आमा र स्त्रीको मामिलामा अधिक संवेदनशील बन्नेछ। विचारको भरमारको कारण मानसिक थकान अनुभव गर्नुहुनेछ। अनिन्द्राको कारण शारीरिक अस्वस्थता रहनेछ। पानी वा अन्य तरल पदार्थ भयानक साबित हुन सक्छ। जमीन, मिल्कियत आदिको चर्चाबाट बच्नुहोला।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer)कार्य सफलता र नयाँ कार्यको शुभारम्भको लागि दिन राम्रो रहेको छ। मित्र तथा आफन्तसँग भेट हुनाले खुशी रहनुहुनेछ। लघु यात्रा हुने योग रहेको छ। प्रिय व्यक्तिको सानिध्यबाट मन रोमाञ्चित बनिरहनेछ। आर्थिक लाभ तथा समाजमा आदर सम्मान मिल्नेछ। विरोधिलाई पराजित गर्न सक्नुहुनेछ। कसैसँग प्रेमको बन्धनमा बाधिनुहुनेछ।
टाढा बस्ने आफन्त तथा मित्रसँग संदेश व्यवहारले लाभ हुनेछ। परिवारमा सुख-शान्ति बनिरहनेछ। उत्तम भोजन प्राप्ति हुनेछ। आफ्नो बोलीले अरुलाई प्रभावित गर्न सक्नुहुनेछ। निर्धारित कामबाट सफलता मिल्नेछ। गणनापूर्वक आयोजन र अत्यधिक विचार मनमा अल्झिरहनेछ। स्त्री मित्र सहायक साबित हुनेछ।
वैचारिक समृद्धि र बोलिको मोहकताले लाभ हुनेछ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकसित गरेर काम निकाल्न सक्नुहुनेछ। व्यवसायिक दृष्टिले दिन लाभदायक साबित हुनेछ। तपाईको स्वास्थ्य राम्रो रहिरहनेछ र मन स्वस्थ रहनेछ। आफन्तसँग भेट हुनेछ र सुख -आनन्द प्राप्त हुनेछ। धन लाभ तथा पर्यटन हुने योग रहेको छ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra)बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला। अन्य व्यक्तिसँगवा कुटुम्बसँग उग्र बोलिचाली हुन् सक्ला। परोपकारको बदला उपकार मिलन सक्छ। आयको अपेक्षा खर्चको मात्रा बढ्नेछ। स्वास्थ्यको विशेष ध्यान राख्नुहोला। दुविधा र समस्याले शान्ति काम गर्नेछ। आध्यात्मिक वाचन वा ईश्वरको नाम स्मरणले शान्ति मिल्नेछ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio)घरायसी जीवनमा सुख र सन्तोष अनुभूति गर्नुहुनेछ। श्रिमान र छोराको तर्फबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। मांगलिक कार्य हुनेछ। विवाहको लागि संयोग बन्नेछ। पेसा-धन्दामा राम्रो अवसर खडा हुनेछ तथा आय वृद्धि हुनेछ। मित्रसँग पिकनिकको आयोजन गर्नुहुनेछ। स्त्री मित्रबाट लाभ हुने योग रहेको छ । वृद्दको सहयोगबाट प्रगति हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)आर्थिक र व्यापारिक आयोजनको लागि शुभ दिन रहेको छ। कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ। तपाईको परोपकार भावना नै सबैभन्दा राम्रो पक्ष रहनेछ। आनन्दमा दिन बिताउनुहुनेछ। पेसा-व्यवसायमा पदोन्नति र मान- सम्मान प्राप्त हुनेछ। घरायसी जीवनमा आनन्द प्राप्त हुनेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)तपाईको दिन मिश्र फलदायक साबित हुनेछ। बौद्धिक र व्यवसायमा नयाँ विचारधारा रहनेछ। लेखन र साहित्यसँग प्रवृत्तिमा सिर्जनात्मकता रहनेछ। मनको कुनै कुनामा अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुनेछ। परिणामस्वरूप शारीरिक थकान र अल्छिपन रहनेछ। सन्तानको समस्याको विषयमा चिन्ता उत्पन्न हुनेछ। उच्च पदाधिकारी वा प्रतिस्पर्धिसँग चर्चामा नउत्रिनुहोला।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius)नकारात्मक विचारले मनमा निराशा उत्पन्न गर्नेछ। यस समय मानसिक उद्वेग र क्रोधको भावना अनुभव गर्नुहुनेछ। बोलीमा विशेष ध्यान नदिदा परिवारमा मनमुटाव वा झगडा होला । स्वास्थ्य खराब हुनेछ। दुर्घटनाबाट बच्नुहोला। ईश्वरको नाम स्मरण र आध्यात्मिक पठनले मानसिक शान्ति दिनेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)तपाई दिन सुख-शान्तिमा बित्नेछ। व्यपारीको व्यवहारमा लाभ हुनेछ। श्रीमानश्रीमती बीच दाम्पत्य जीवनमा निकटता अनुभव गर्नुहुनेछ। मित्र र आफन्तसँग भेट हुनेछ। प्रेमीसँग रोमान्समा समय बिताउनुहुनेछ। सार्वजनिक जीवनमा प्रसिद्दि मिल्नेछ । उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हुनेछ।